Warshada Qalabka Nadiifinta Hadhuudhka Shiinaha, Alaabta Nadiifinta Hadhuudhka
Dhagax-tuurka taxan ee TQSF ee nadiifinta hadhuudhka, Si loo saaro dhagaxa, Si loo kala saaro hadhuudhka, Si loo saaro wasakhda iftiinka iyo wixii la mid ah.
TCXT Taxanaha Tubularka Magnet
TCXT Series tubular Magnet ee nadiifinta hadhuudhka, Si looga saaro wasakhda birta.
Magnet-ka ee magnet-ka khaanadaha aanu aaminay waxa uu ka samaysan yahay wax qabad sare oo naadirka dhulka ah walxo birlab ah oo joogto ah.Markaa qalabkani waa mishiin ka saara birta oo aad u fiican warshadaha sida cuntada, dawooyinka, elektiroonigga, dhoobada, kiimikooyinka, iyo wixii la mid ah.
Mashiinkan waxa loo isticmaalaa xaga sare ee silo si looga saaro boodhka iyo ka saarida mugga hawo yar ee dhibicda boodhka ah.Waxa aad loogu isticmaalaa warshadaha daqiiqda, bakhaarrada iyo bakhaarrada hadhuudhka makaanaysan.
Qalab-shiid kiimikaad-TSYZ Taxanaha cadaadiska cadaadiska ayaa door muhiim ah ka ciyaara xakamaynta qoyaanka qamadiga inta lagu jiro habka nadiifinta sarreenka ee miraha burka.
Dampener-ka degdega ah waa qalabka ugu muhiimsan ee nidaaminta biyaha qamadiga ee habka nadiifinta sarreenka ee warshadda burka.Waxay dejin kartaa tirada qoyaanka sarreenka, waxay hubisaa qoyaanka hadhuudhka sarreenka si siman, wanaajiso waxqabadka shiida, wanaajiso adkaanta bran, yareyso endosperm xoogga iyo yaraynta adhesion ee bran iyo endosperm taas oo faa'iido u leh si loo hagaajiyo waxtarka shiidi iyo shaandhaynta budada.
Mashiinka nabaad-guurinta galleyda, Oo lagu qalabeeyay dhowr farsamooyin heer sare ah, marka la barbar dhigo mishiin la mid ah oo ka yimid dibadda, MLT taxane ah oo deerminator ayaa caddaynaya inuu ugu fiican yahay habka diirinta iyo biqilka.
Hawo-raadiyaha dib-u-warshadaynta waxaa inta badan loo adeegsadaa agabka granular ee lagu nadiifiyo kaydinta hadhuudhka, daqiiqda, quudinta, dawooyinka, saliidda, cuntada, wax-samaynta iyo warshadaha kale.Hawo-qaadiyaha dib-u-warshadaynta dib-u-warshadaynta waxay ka sooci kartaa wasakhda cufnaanta hoose iyo alaabta granular (sida sarreenka, shaciir, basbaaska, saliidda, galleyda, iwm.) iyo badarka.Qalabka dib-u-warshadaynta hawo-mareenku wuxuu qaataa qaabka wareegga hawada ee xiran, markaa mishiinka laftiisa ayaa leh shaqada qaadista boodhka.Tani waxay badbaadin kartaa mishiinnada kale ee boodhka ka saara.Oo ay ugu wacan tahay in aanay hawada is dhaafsanaynin dibadda, sidaa awgeed, waxay ka fogaan kartaa luminta kulaylka, oo ma wasakhayso deegaanka.
Scoourer-ka jiifka ah wuxuu guud ahaan la shaqeeyaa kanaalka hamiga ama kanaalka hamiga dib-u-warshadaynta ee meesha laga soo baxo.Waxay si hufan uga takhalusi karaan qaybo qolof go'day ama wasakh dusha sare ee hadhuudhka.